Dubai one of the most significant cities nowadays – Jobs – Career – Travel
Dubai mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan maalmahan
Amaanka Dubai & Road
Waxaa laga yaabaa 9, 2019
14 Fikradaha Ganacsiga ee ugu haboon ee Ganacsiga ah ee Ganacsigaaga ee Dubai
Waxaa laga yaabaa 11, 2019
Dubai mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan maalmahan!
Dubay - mid ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan xilligan. Waa isku darka u dhexeeya casri, mustaqbal iyo deegaan cusub iyo dadyow kala duwan. Waa wax lala yaabo in lagu arko dhaqamo badan oo kaladuwan oo hal meel ah iyo Baro dhaqanka Carabiga isla mar ahaantaana. Magaalada waxaa ku yaal meelo badan oo laga baadi goobo iyo madadaalo.
Waxa ugu horreeya ee aad aragto markii aad timaadid Dubai waa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dubai. Mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ugu weyn uguna xiisaha badan adduunka. Hal talo oo aan ku siin karo waa inaad qorto adeegga Marhaba kahor imaatinka. Tani waa adeeg aad u faa'iido badan oo qiimo badan garoonka diyaaradaha mashquulka badan. Waqti ayey kuu badbaadin doontaa waxayna ka fogaan doontaa jahwareerka laga yaabo inaad haysato markaad timaadid.
Kaaliyaha garoonka diyaaradaha Waxaan kugu sugi doonaa albaabka markaad timaadid oo ilaalin doonto dhammaan qaababka garoonka diyaaradaha. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad siiso baasaboorkaaga wakiilka oo isagu ama iyadu way daryeeli doonaan inta hartay, intaad haysatid waqti aad ku indho indhayso oo aad “ku fiiriso” garoonka diyaaradaha.
Maaddaama masaafada ay jiraan wax aad u weyn, Waxaa lagu siin doonaa gaari xamuul ah, kaasoo kaa soo kaxayn doona albaabka imaatinka imaatinka caanka ah ee loo yaqaan 'ELEVATOR', kaasoo kugu geyn doona aaggaga canshuurta iyo boorsada. Wiishkani waa sidaas la yaab leh in laga tago dareenka WOW, inta lagu dhex safrayo maxaa yeelay way weyn tahay oo waxay qaadan kartaa dadka 60 sidoo kale waxaa jira biyo-dhac qurux badan oo gadaashiisa ah si ay u daawadaan inta ay ku dhex safrayaan.
Badanaa, safka kastamka waa dheer yahay, maxaa yeelay waxaad marka hore ubaahantahay inaad sameyso iskaanka indhaha kadibna ka dib baarista baasaboorka. Adeegyada Marhaba, waad ka baxsan kartaa safka, sababtoo ah waxaad leedahay mudnaan dhinaca gaarka loo qoondeeyay oo si dhakhso leh uga gudba kuwa kale. Sidoo kale aagga sheegashada boorsada, waxaa jiri doona wakiil leh trolley, kaas oo daryeeli doona boorsadaada, kugu wareejin doona bixitaanka, oo xitaa geli doonta gaariga adiga, adigoon xitaa dhib lahayn. Adeeggan waxaa ka mid ah bixinta fiisaha markay soo degaan iyo sidoo kale qol gaar ah oo lagu nasto ka hor intaadan safrin. Marka taasi waa talo wanaagsan inaad maskaxda ku hayso markii aad booqaneyso Dubai gaar ahaan markay tahay markii ugu horraysay.
Maanta waxaan ka heleynaa magaaladan waxaanan muujin doonaa jawigeeda
Mid ka mid ah meelaha xiisaha badan waa Dubai Marina. Agagaarka waxaa ka buuxa maqaayado iyo baararka wanaagsan oo leh muuqaal qurux badan oo hudheel Burj Al Arab ah. Waxaad dareemi kartaa jawiga carbeed ee dabiiciga ah adigoo isku dayaya sidii caadiga ahayd Carabi Cuntada adoo haysta shisha - aalad sigaar cabid maxalli ah oo leh dhadhan kala duwan.
Nashaadaad xiisaha koowaad waa inaadan hilmaamin booqashada abaarta. Haddii aadan tagin lamadegaanka markaa ma aadan aadin Dubai.
Safari cidlada ah waxaa ka mid ah waxqabadyada sida: Dune Bashing oo wata gaari xamuul ah oo ciidda dhexdeeda ah. Geela fuushan, oo casho cunaya, oo ku fadhiisanaya rooga khaaska ah ciidda adoo daawanaya qoob ka ciyaarka caloosha carabta -an muuqaal cajiib ah halkaad ku arki karto oo kaliya Dubai. Mid ka mid ah qoob-ka-ciyaarka ugu khatarta badan uguna quruxda badan waa haweeney qoob-ka-ciyaarin oo seefta gacmaheeda ku jirta, hoosta heesaha heesaha oriental. Waxay ciyaareysaa oo ku dhaantaa si siman sida toy, laakiin waqti isku mid ah waxay ku ilaalineysaa daawadayaasha xaalad kacsan oo ka dhigeysa inay dareemaan inay ku jiraan mashiin waqti ah. loo beddelay sheekooyinkaas sixirka carabta.
Way ciyaaraysaa oo ku ciyaartaa si aad u siman sida toy, laakiin waqti isku mid ah xaji goobjoogaha xaalad kacsan iyo iyaga oo ka tagaya inay dareemaan sidii wakhtigii mashiinka loogu wareejiyay sheekooyinkaas sixirka carabta.
Waxqabadka kale waa Henna Rinjiyeynta- sawirro qurux badan oo caadi ahaan laga sameeyay gacmaha iyo curcurka. Waxay u egtahay tattoo laakiin leh midab bunni ah, kaas oo socdaa ilaa toddobaad ama laba, waxay kuxirantahay sida aad u daaweyso iyo sida badan ee ay biyuhu u soo gaadhaan. Caadi ahaan dumarka maxalliga ah waxay u labistaan ​​sidii wax sharraxsan lagu daro kooxdooda qaran.
Waxaa ku yaal dukaanno badan iyo suuqyo badan oo lamadegaanka ah, halkaasoo aad ka iibsan karto qalabka fadhiga iyo dharka ay qoob-ciyaarayayaashu xirtaan- waa laba qaybood oo dhar ah oo midabbo kala duwan leh oo loogu talagalay qalin yar oo dahab ah oo dul saaran, kaas oo abuuraya buuqaas halka qoob-ka-ciyaarka nooca oriental caadiga ah. Taasi waxay ku sii jiri kartaa xusuusta qolkaaga dharka. Safari saxaraha waa khibrad aan la ilaawi karin taas oo ay tahay in la sameeyo marka aad booqanayso Dubai Waad si fudud ugu ballansan kartaa hal-abuurkan mid ka mid ah shirkadaha maxalliga ah ee Desert safari Dubai http://www.desertsafaridubai.com/ halkaas oo aad ka heli karto dalabyada qiimaha ugu fiican iyo noocyada kala duwan ee baakooyinka.
Burj Khalifa oo ah dhismaha ugu dheer dunida
Goobta xigta ee fiirinta qasabka ah waa, dabcan, dhismaha ugu dheer adduunka Burj Khalifa. Isha isha agteeda ah waa biyo dhaansasho qurux badan oo ka hooseysa dhawaaqa qaababka muusikada ee kaladuwan iyo saameynta iftiinka. Waxaa jira maqaayado badan, dukaamo iyo baarar aagga aad ka sahamin karto.
Dukaamada wax iibsiga, waxaa jira dad badan, laakiin ugu caansan waa Dubai Mall iyo Mall Emirate-ka. Gudaha Mall ee Emirate-ka, waxaad arki kartaa aag baraf ah oo laga soo qaaday cimilo kulul oo ka baxsan dibadda waxaa laga yaabaa inaad la kulanto baraf ka dhex dukaameysanaya suuqa weyn.
Xarunta ganacsiga ee Dubai waxay leedahay qoob ka ciyaarka ugu weyn halkaas oo aad ku arki karto nacas iyo dabeecado kale oo kala duwan.
Dukaamaysigu waxay noqon karaan waxoogaa xiiso yar. Ka sokow dhammaan dukaamada iyo suuqyada waaweyn, waxaa jira meelo kale oo qarsoon oo ay ku taal waxaad ku samayn kartaa dukaameysiga hal nooc oo wax yar oo kala duwan oo aan dabiici ahayn. Hagaag, waxaan wada ognahay goobta filimka labaad ee galmo iyo magaalada, halkaasoo gabdhaha ay aadayaan dukaamada qarsoon si ay ugu iibsadaan bacaha magacyada been abuurka ah. Taasi waa sax - Waxaan ka hadlayaa dukaamada qarsoon. Kuwani waa meelaha aadan runtii arki karin maxaa yeelay waxay ku yaalliin dhismayaal lagu noolaado.
Haddii aad la kulantid iibiye dariiqa oo kugu martiqaadaya inaad fiiriso dukaanka qarsoon, Ha cabsanina oo u tag si aad wax u aragto oo aad qibrad u hesho habkan xiisaha badan ee wax laga iibsado. Xusuusnaw inaad wadaxaajood gasho !. Iibiyayaashu waxay jecel yihiin inay wax kala baxaan, marka waa inaad heysataa xirfado wanaagsan oo caqabad ku ah haddii kale waxaa laga yaabaa inaad kubixiso lacag aad u fara badan on sumadaha been abuur ah.
Dhamaanteen waan ognahay sida dhalaalaya, hal-abuurnimo iyo dhaldhalaal waa Dubai. Laakiin xitaa da’da da’da yar ee dalka, dalkani sidoo kale taariikh ayuu leeyahay. Waad indha indheyn kartaa oo aad sahamin kartaa magaalada duqa ah ee Dubai. Si aad halkaas u tagto waa inaad kaxaysato doonnida oo aad ka gudubtaa wabiga 1 ama 2 dirhams oo keliya. Tani waa waayo-aragnimo aan caadi ahayn maxaa yeelay doonyahaani waa kuwa aad u yar oo gaagaaban oo dareenka ah inaad ku safartid waxay la mid tahay inaad daqiiqad kasta ku dhex dhici karto biyaha.
Doomaha ayaa qaadan kara ilaa 4 ama 5people iyo sida caadiga ah waxaa jira hal qof oo doonta gala. Markaad gaadho dhinaca kale waxaad gasho adduunyo sixir dumara ah - souk-jirkii hore ee Dubai. Wadooyinka yar yar waxaa ka buuxa basas. Kala duwanaanta ugu weyn iyo dhir udgoon oo aad weligaa ku arki karto noloshaada. Boorsooyinka waaweyn waxaa ka buuxa dhir udgoon oo aad u qurux badan, qaarkoodna xitaa aan aqoon iyo qalaad. Oo urta iyo caraf udgoon hawada aad dareemi karaan iyaga ka macaan oo ka daran yahay taas oo maskaxdaada lagu qabsan doono weligaa. Tani waa meel kale oo qaadanaysa sheeko "Cali Baba iyo tuugo 40" ah.
Dubai City - Gabagabo
Halkani waa halka ay hiigsigeenu ku dhammaado, laakiin magaaladan waxay ku dhuumaneysaa meelo kale oo badan in ay yihiin kuwa aad u yaab badan iyo dhacdooyin lagu sahaminayo. Dubai waa mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan iyo magaalooyinka firfircoon ee adduunka, oo aad u baahan tahay inaad soo booqato.
Shirkadda Dubai City ayaa hadda bixinaysa Tilmaamaha wanaagsan ee Nolosha Dubai. Kooxdayada ayaa go'aansaday in ay ku daraan macluumaadka luuqad kasta ee noo Shaqooyinka ku yaala Dubai. Sidaa daraadeed, arrintaan maskaxda ku haysa, waxaad hadda heli kartaa hage, talooyin iyo shaqo ku qoran Imaaraadka Imaaraadka Carabta adoo luuqaddaada ku hadlaya.